खो’प लगाएकाले अब कोरियामा १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने – Eps Sathi
खो’प लगाएकाले अब कोरियामा १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने
May 5, 2021 787
खो’पको दुबै डो’ज लगाएका अर्थात खो’पको पूरा मात्रा पाइसकेकाहरुले दक्षिण कोरियामा अब १४ दिन क्वा’रेन्टिनमा बस्नु नपर्ने भएको छ। त्यहाँका स्वा’स्थ अधिकारीहरुले बुधबार बताएअनुसार अर्को महिनादेखि यस्तो नि’यम लागू हुनेछ। अहिले कोरियामा को’रोना सं’क्र’मितसँग स’म्पर्क भएमा तथा विदेश बाट आउने सबैले अनिवार्य १४ दिन क्वा’रेन्टिनमा बस्नैपर्ने नि’यम रहेको छ।
स्वा’स्थ्य अधिकारीहरुले भनेका छन कि जो ब्यक्तिले पूरा मात्रामा खो’प लगाएको छ उसले मे ५ देखि विदेश बाट आउँदा होस वा सं’क्र’मितसँग स’म्पर्क भएमा होस यदि उसको टे’स्ट ने’गेटिभ छ भने १४ दिन क्वा’रेन्टीन बस्नुपर्ने छैन। यसअघि यस्तो अवस्थामा अ’निवार्य क्वा’रेन्टीन बस्नैपर्ने नि’यम रहेको थियो।
यो नि’यम अहिले खो’पको दुबै डो’ज लगाएको २ हप्ता कटेकाहरुमा मात्र लागू हुने बताइएको छ। यो नि’यम कोरियन तथा विदेशी सबैमा लागू हुनेछ। तर क्वारे’न्टीनमा नबसे पनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई शु’क्ष्म नि’गरानीमा भने राखिनेछ। उनिहरुको को’भिड टे’ष्ट पनि गरिनेछ।
दक्षिण कोरियाले अहिले फाईजर र एष्ट्राजेनेका कम्पनीका खो’पहरु कोरियामा लगाइरहेको छ। यि दुबै खो’प हरेक मानिसलाई २ डो’ज लगाउनुपर्दछ। कोरियाले जोनसन एण्ड जोनसन कम्पनीको खो’प पनि प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ भने मोडर्ना र नोभाभ्याक्स खो’पलाई अझै सम्म पनि प्रयोग अनुमति दिइएको छैन।
तर यो क्वारे’न्टिन बस्न नपर्ने नि’यम विदेशमा कोरियाले प्रयोग अनुमति नदिएको खो’प लगाएकामा लागु हुनेछैन। उदाहरणका लागि चीनले उत्पादन गरेको सिनोफार्म तथा रसियाको स्पुतनिक भ्या’क्सिन लगाएकाले कोरियामा क्वा’रेन्टिन बस्न नपर्ने छुट पाउने छैनन। त्यसैगरी अहिले फै’लिरहेको नयाँ भे’रियन्ट भएका देश जस्तै ब्राजिल दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशबाट आउनेहरुमा पनि यो नि’यम लागू’ हुनेछैन अर्थात उनिहरुले १४ दिन क्वारे’न्टीन बस्नै’पर्दछ।
Prevसिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको आइपिओ कतिले भरे? कतिले पाउनेछन सेयर? जानिराखौं
Nextदक्षिण कोरियाले आयोजना गर्ने विश्वकप फुटबल क्वालिफायरमा उत्तर कोरिया सहभागी नहुने
खुल्यो इजरायल जाने आवेदन, मासिक डेढ लाख माथि कमाई, को को जान पाउँछन? कसरी दिने आवेदन?
अमेरीकालाई किम जङ उनकी बहिनीको ध’म्की
रहिनन चर्चित दक्षिण कोरियाली अभिनेत्री किम सू
कोरियामा कर उठ्ने क्रम बढ्दो, चालु बर्षको पहिलो पाँच महिनामै उठ्यो १ हजार ६ सय १८ खर्ब वन